बोर्ड संग कुरा नमिलेपछि महालक्ष्मी विकास बैंकका सिईओ लामिछानेले दिए राजिनामा - Artha Path Artha Path
बोर्ड संग कुरा नमिलेपछि महालक्ष्मी विकास बैंकका सिईओ लामिछानेले दिए राजिनामा
प्रकाशित मिति : ४ श्रावण २०७७, आईतवार
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकका सिईओ कृष्णराज लामिछानेले राजिनामा दिएका छन । विगत ३२ महिना अघि सिईओ नियुक्त भएका लामिछानेले शुक्रबारै राजिनामा दिएर घर बसेका छन ।
पछिल्लो समय महालक्ष्मी विकास बैंकमा संचालकहरुको हस्तक्षेपका कारण लामिछानेले बैंक छाडेका हुन । सिईओ नियुक्त भएदेखि नै एउटा ग्रुप लामिछानेसँग सन्तुष्ट थिएन । प्रोफेसनल बैंकरको परिचय बनाएका लामिछानेले बोर्डको प्रेसर थेग्न नसकेर राजिनामा दिएका हुन । साउन १ गते लामिछानेले बैंक संचालक समितिसमक्ष राजिनामा दिएका थिए । बैंक संचालक समितिले साउन २ गते शुक्रबारनै उनको राजिनामा स्वीकृत गरेको छ ।
लामिछाने २०७४ कार्तिकमा महालक्ष्मी विकास बैंकको सिईओमा नियुक्त भएका थिए । बैंकिङ क्षेत्रमा राम्रो ज्ञान भएका लामिछाने नेपाल बैंकबाट बैकिङ क्षेत्र प्रवेश गरेका व्यक्ति हुन । लामिछाने महालक्ष्मीको सिईओ हुनुपुर्व कैलाश विकास बैंकमा २ कार्याकाल सिईओ भएका थिए ।
उनि २ पटक विकास बैंकहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैकर्स एशोसिएनका अध्यक्षसमेत भएका थिए । महालक्ष्मी विकास बैंकका सिईओ रमेश भट्टराईले छाडेपछि उनलाई सिइओ नियुक्त गरिएको थियो । २० वर्ष नेपाल बैंकमा काम गरेका लामिछाने कैलाश विकास बैंकमा ८ वर्ष सिईओ भएका थिए ।
सिईओ लामिछानेले बैंक छाडेपछि कामु सिईओको जिम्मेवारी सागर शर्मालाई दिइएको छ । शर्मा लामिछाने आउनुपुर्व पनि कामुको जिम्मेवारीमा थिए ।
के–के गरे महालक्ष्मीमा लामिछानेले ?
३२ महिना सिईओ सम्हाल्दा लामिछानेले बैंकको वित्तिय सूचकनै परिवर्तन गरिदिएका छन । लामो समय डिभिडेन्ट नदिएको बैंकले उनि आएको पहिलो वर्ष ९ प्रतिसत, दोस्रो वर्ष १५ प्रतिसत र तेस्रो वर्ष १८ प्रतिसत लाभासं खुवाएका थिए ।
२० अर्वको पोर्टफोलियो भएको बैंकलाई लामिछाने नेतृत्वको टिमले ३२ महिनामा ३७ अर्वको पोर्टफोलियोमा पुर्याएको छ । यती डेभलपमेन्ट बैंक र महालक्ष्मी विकास बैंक मर्ज गरेर बनेको सबैभन्दा ठुलो विकास बैंक पछिल्लो समय वित्तिय अवस्था सुध्रिढ हुँदै आएको थियो ।
ग्लोबल आइएमई बैंक पुनः फर्किए भेट्रान बैंकर बज्राचार्य, भदौ १ देखी कार्यभार सम्हाल्ने
काठमाडौं । भेट्रान बैंकर रत्नराज बज्राचार्य पुनः ग्लोवल आइएमई बैंकको सिईओमा नियुक्त भएका छन ।
कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च बैंकले नै गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा परिपत्र जारी गर्दै कोरोना
देशभरि ९४२ आइसीयु र ४९६ भेन्टिलेटर, कुन प्रदेशमा कति ?
काठमाडौं । हालसम्म देशभरि ९ सय ४२ आइसीयु र ४ सय ९६ भेन्टिलेटर रहेका छन्
काठमाडौं । कारोना भाईरसबाट थप चार जनाको मृत्यु भएको छ । योसंगै कोरोना भाईरसबाट मृत्यु